Marketing manokana: 4 lakilen'ny fananganana mahomby | Martech Zone
Marketing personalization: lakilasy 4 ahazoana fototra mahomby
Talata, Desambra 13, 2016 Alakamisy, Desambra 15, 2016 Douglas Karr
Ny personalization dia ny fahatezerana rehetra izao fa paikady mety hanaratsy be raha tsy mety ny nanaovana azy. Andao haka ohatra mahazatra indrindra - ahoana ny fahatsapanao rehefa mahazo mailaka amin'ny fisokafany ianao ry malala %%Fanampin'anarana%%… Tsy izany ve no ratsy indrindra? Na dia ohatra miharihary aza izany, ny tsy dia miharihary dia ny fandefasana tolotra sy atiny tsy misy dikany amin'ny fiarahamoninao. Izany dia mitaky fototra efa napetraka.
Ny traikefa lasibatra manan-karena, mavitrika ary voafaritra tsara dia manamora ny fiainana ny mpanjifa ary mampitombo ny fahombiazan'ny fandaniana amin'ny marketing amin'ny orinasa. Tena fandresena azon'ny rehetra izany.
Ity infographic avy amin'ny MDG Advertising ity dia mandeha amin'ny alàlan'ny angona avy amin'ny Adobe, Aberdeen Group, Adlucent ary fanadihadiana maro hafa izay mamintina fototra fototra 4 hahombiazana.
Tetika hendry vs. moana: Ny personalization dia midika bebe kokoa noho ny tsotra anisan'izany ny anarana. Ny personalization fototra dia misy fiantraikany kely amin'ny fiankinan-doha; na izany aza, ny hafatra mifototra amin'ny hetsiky ny mpampiasa manokana dia manana tahan'ny fisokafana 2X sy tahan'ny tsindry 3X raha oharina amin'ny mailaka mahazatra. Ianaro ny maha-zava-dehibe ny fanentanana mavitrika amin'ny fampiraisana mahomby.
Fijery tokana an'ny mpanjifa: Nilaza ireo mpanjifa fa ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fananganana manokana ireo dia doka / hafatra tsy misy dikany, fahitana haingana ireo vokatra / serivisy vaovao, ary fifanakalozana kalitao avo lenta. Mba hanaterana ireo traikefa ireo sy hanananao ny herin'ny fikendrena dia mila manankarena sy manavao hatrany ny mombamomba ny mpanjifa ianao. Jereo hoe maninona ny fananana fomba fijery tokana ny mpanjifa no fototry ny fahombiazana.
Data sy rafitra: Ny personalization sy ny data / ny rafitra dia tsy mifandray fotsiny, fa mifamatotra ifotony. Amin'ireo mpivarotra milaza fa tsy manavaka ny atiny, 59% no milaza fa sakana lehibe ny teknolojia ary 53% no milaza fa tsy manana angon-drakitra mety. Topazo maso ny fomba fampiasam-bola amin'ny sehatra mety ary afaka mandoa be ny olona.
Fangaraharana sy filaminana: Ny olona dia mailo hatrany amin'ny fanatontosana azy manokana satria tsy azony antoka ny fomba fampiasana sy fitehirizana ny angona. Izay no maha zava-dehibe ny fanaraha-maso sy ny filaminana. Manodidina ny 60% amin'ireo mpampiasa an-tserasera no te hahalala ny fomba fisafidianan'ny tranonkala iray ny atiny natokana ho azy ireo ary ny 88% amin'ireo mpanjifa no maniry ny mamaritra ny fomba hampiasana ny angon-drakitra manokana. Fantaro ny fomba handaminana tsara ireo olana ireo.
Raha te hahalala ny fomba hanaovana ny ankamaroan'ireo tetika ireo amin'ny marikao dia zahao Dingana 4 hamaha ny tena herin'ny personalization amin'ny marketing.
Tags: fahitan'ny mpanjifafidirana amin'ny dataData Securitymangarahara datadokam-barotra mdgpersonalizationdata momba ny personalizationsecuritymangarahara
Douglas Karr Tuesday, December 13, 2016 Thursday, December 15, 2016
Scenario marketing avy any amin'ny helo - Fitarihan-tànana marobe, saingy tsy misy varotra
Fahadisoana lehibe 5 tokony hialana amin'ny automatisation marketing